Man Utd oo markii todobaad wakiilo u dirtay James Rodriguez. - Caasimada Online
Home Warar Man Utd oo markii todobaad wakiilo u dirtay James Rodriguez.
Man Utd oo markii todobaad wakiilo u dirtay James Rodriguez.
Manchester United ayaa axada saraakiil daawata u diri doona markii Todobaad ee xilli ciyaareedkaan ciyaaryahanka garabka uga ciyaara FC Porto James Rodriguez.
United ayaa wakiilo usoo arkeen 21 jirkaan reer Colombia, xilli uu gool ka dhaliyey Academica de Coimbra. Porto ayaana daaha ka qaaday inaysan dooneyn inay iibiyaan waxaana qandaraaskiisa lagu burburin karaa 24 milyan oo ginni.
Waxaan la rumeysan yahay inay isha ugu hayaan bedelka ciyaaryahanka reer Portugal ee garabka ka ciyaara Nani oo ku socda wadadii uu kaga tegi lahaa Old Trafford ka dib markii uu hakad geliyey wadahadalo uu qandaraaska ugu kordhin lahaa kooxda.